Inhloko ZeNdaba Mpandula 13, 2021
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi phose ezintathu– 2,845,148, asebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyeCovid 19 Vaccine, lokhe lwaqalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili - 1,863,136, asebehlatshwe ijekiseni lesibili.
Abazali labafundi bamukele ngenjabulo ukwengezelelwa kwamalanga okubhalisela ukubhala imihloliso yeOlevel le Alevel. Inhlanganiso ebona ngokubhalwa kwemihloliso eyeZIMSEC ithi ukuvulwa kokubhadalela imihloliso kuzamiswa mhlaka 30 Mpandula.
Uzulu utshengisa uveza ukukhathazeka ngesaziso esisanda kwethulwa ngabenkampani yamandla kagetsi eye Zimbabwe Electricity Transmission & Distribution Company - ZETDC ukuthi sebezoqhuba uhlelo lokucitshela abantu lamankampani amandla kagetsi ngoba ifuna ukulondoloza akhona wona asemalutshwana ngemva kokuqhamuka kodubo lokungasebenzi kuhle kwemitshina esititshini seHwange kanye lokuthi kulomsebenzi wokulungisa idamu le Kariba osekubangele ukucitshwa kwemitshina ephehla ugetsi.
Kababoni ngaso linye abalandeli bomdlalo wenguqu phezu kosekelo lwemali oluvela kunkampani ye Sakunda olubikwa luzaphiwa amaqembu abalisa ele Highlanders kanye lele Dynamos.
Ku Livetalk namhlanje sikhangela isimo sokumelana leCovid 19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulei gcikwane.